Laf-dhabarta Xulka Qaranka Croatia Oo La Xaqiiyey In Korona Fayras Ku Dhacay Xilli Spain Sugayso - Laacib
HomeWararka Ciyaaraha MaantaLaf-dhabarta Xulka Qaranka Croatia Oo La Xaqiiyey In Korona Fayras Ku Dhacay Xilli Spain Sugayso
Laf-dhabarta Xulka Qaranka Croatia Oo La Xaqiiyey In Korona Fayras Ku Dhacay Xilli Spain Sugayso
Xulka qaranka Croatia ayuu usoo yeedhay war ay aad uga naxeen oo kusoo beegmay xilligii ugu xumaa, waxaana lagu wargeliyey in Fayraska Korona uu kaga dhacay mid ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan oo uu geli doono karantiil maalin ka hor kulanka adag ee ay kula ballansan yihiin Spain.
Croatia ayaa Isniinta la ciyaari doona Spain kulan ka tirsan wareegga 16ka tartanka qaramada Yurub, laakiin ciyaartan muhiimka ah ee ka dhacaysa magaalada Copenhagen, waxa seegi doona laacibka khadka dhexe ee Ivan Perisic oo gelaya karantiil toban maalmood ah.
Xidhiidhka kubadda cagta Croatia ayaa sheegay in baadhitaan lagu sameeyey ciyaartoyda iyo tababareyaasha laga waayey fayraska balse Perisic oo kaliya laga helay, isla markaana aanu qayb ka noqonayn xulka safarka ku tegaya Copenhagen.
War-saxaafadeed uu soo saaray FA-ga Croatia ayaa lagu yidhi: “Intii lagu jiray caweyska, xidhiidhka kubadda cagta Croatia waxa uu helay natiijada baadhitaankii joogtada ahaa ee SARS-COV-2 ee lagu sameeyey ciyaaartoyda iyo tababareyaasha, waxaanu muujiyey in xubin ka tirsan xulka qaranka oo ah Ivan Perisic laga helay Korona Fayras. “Adeegeyaasha caafimaadka ee xulka qaranka ayaa Ivan ka karantiilay ciyaartoyda kale ee xulka.
“Perisic wuxuu toban maalmood ku jiri doonaa karantiil, muddadaasna uma tartami doono kulamada xulka qaranka Croatia.”
Ciyaartoyda xulka qaranka Croatia oo aanu la socon Ivan Perisic ayaa maanta gellinkii hore ka duulay magaalada Pula iyagoo kusii jeeda Copenhagen oo ay Isniinta kula ciyaari doonaan Spain.”